Ny Kanadiana izao dia afaka mamandrika fitiliana PCR ao amin'ny hotely any Jamaika amin'ny vidiny midina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Ny Kanadiana izao dia afaka mamandrika fitiliana PCR ao amin'ny hotely any Jamaika amin'ny vidiny midina
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Fitsapana mialoha ny fiaingana Jamaika ho an'ireo mpitsangatsangana kanadiana
Ireo Kanadiana mandeha any Jamaika izao dia hahazo tombony amin'ny serivisy fitiliana PCR azo idirana sy mora kokoa raha mbola any amin'ny toerana haleha noho ny fitohizan'ny ezaka ataon'ny Jamaica Tourist Board (JTB). Niara-niasa tamin'ny laboratoara tsy miankina roa ao amin'ny nosy ny manampahefana Jamaikana mba hanomezana fahafaham-po ireo Kanadiana miverina mody amin'ny fanaovana fitiliana PCR ao amin'ny hotely amin'ny vidiny midina.
Ny mpitsidika kanadiana any Jamaika dia tsy afaka mamandrika fitiliana COVID-19 mialoha ny fiaingana amin'ny fampihenana ny vidiny mihoatra ny 50%.
Ireo mpizahatany mijanona ao amin'ny hotely manana fahazoan-dàlana ao amin'ny Corridors Resilient ao Jamaika sy ireo trano hafa nankatoavina dia afaka mandamina fitsapana PCR hatao amin'ny trano amin'ny alàlan'ny serivisy concierge.
Afaka mamandrika fitiliana PCR amin'ny anaran'ny mpanjifany mialoha ihany koa ireo mpiasan'ny fitsangatsanganana.
Manomboka ny alatsinainy 25 oktobra, ireo mpitsidika kanadiana dia afaka mamandrika mivantana ny fitiliana molekiola COVID-19 mialoha ny fiaingana amin'ny alàlan'ny Baywest Wellness Clinic ary Ny sandan'ny anjara Technological Solutions Limited (TSL) ho $75 USD (anisan'izany ny hetra), fampihenana mihoatra ny 50% amin'ny vidin'ny fitiliana PCR teo aloha. Ny mpitsidika dia tsy maintsy mandamina ny fitsapany amin'ny alàlan'ny vavahadin'ny laboratoara an-tserasera natokana ho an'ny mahafeno an'io sarany manokana io.
Ireo mpizahatany mijanona ao amin'ny hotely manana fahazoan-dàlana ao amin'ny Jamaika's Resilient Corridors sy ireo trano hafa nankatoavina dia afaka mandamina fitsapana PCR hatao amin'ny trano amin'ny alàlan'ny serivisy concierge. Ireo mpitsidika mijanona ao amin'ny villa manokana, trano fandraisam-bahiny, na trano fonenana dia afaka mamandrika fotoana manokana any amin'ny toerana laboratoara Baywest na TSL akaiky indrindra. Afaka mamandrika fitiliana PCR amin'ny anaran'ny mpanjifany mialoha ihany koa ireo mpiasan'ny fitsangatsanganana.
"Ny fitsapana PCR ao amin'ny hotely vaovao any Jamaika sy ny fampihenana ny vidiny dia ho fanovana lalao ho an'ny Mpizaha tany kanadiana mitsidika ny toerana haleha”, hoy ny Minisitry ny Fizahantany Jamaika, Hon. Edmund Bartlett. “Ity ezaka ity no hetsika farany amin'ny fitohizantsika Jamaika CARES fandaharana, fanoloran-tena feno amin'ny toerana rehetra hanomezana traikefa azo antoka sy tsy misy fotony ny mpandeha rehetra rehefa mitsidika ny nosintsika mahafinaritra. "
"Ny vanim-potoanan'ny fararano sy ny ririnina ho avy dia manan-danja ho an'ny sehatry ny fizahan-tany any Jamaika, ary ny JTB dia mirehareha amin'ny fifampiraharahana amin'ny safidy fitiliana COVID-19 ho an'ny mpandeha Kanadiana any amin'ny nosy," hoy i Donovan White, talen'ny fizahantany, Jamaika. "Ny mpiara-miombon'antoka rehetra any Jamaika sy Kanada dia tena mankasitraka fa ny mpitsidika any amin'ny toerana haleha dia hanana fidirana amin'ny fitiliana PCR be pitsiny amin'ny fampiononana ny trano fandraisam-bahiny amin'ny fihenam-bidy be."
Ireo Kanadiana mandeha any Jamaika dia afaka mamandrika fitiliana PCR an-tserasera alohan'ny hiaingana na mandritra ny toerana haleha amin'ny alàlan'ireto sehatra famandrihana roa ireto:
Ny sehatra an-tserasera dia maka ny fampahalalana ilaina rehetra ilaina hidirana indray any Canada, ao anatin'izany ny daty dia sy ny toerana hanaovana ny fitsapana. Ny fandoavam-bola ho an'ny serivisy dia atao amin'ny Internet amin'ny fotoana famandrihana amin'ny carte de crédit. Ny valin'ny fitsapana avy amin'ny Baywest sy TSL dia halefa mivantana amin'ny mpanjifa 24- hatramin'ny 48 ora aorian'ny fanangonana santionany.
"Niasa mafy ny JTB mba hiara-hiasa amin'ireo laboratoara nahazo mari-pankasitrahana ao amin'ny firenena mba hanamora ny fitiliana azo idirana sy mora kokoa ho an'ireo mpitsidika kanadiana," hoy i Angella Bennett, Talem-paritra, Canada, Jamaica Tourist Board. “Tena faly izahay hitondra an'io serivisy nohatsaraina efa nandrasana hatry ny ela io ho eny an-tsena ary hahatonga ny dia ho any Jamaika ho mora kokoa ho an'ny Kanadianina amin'ity ririnina ity."
Araka ny voalazan'ny torolàlana momba ny fitsangatsanganana amin'izao fotoana izao any Canada, ny mpandeha rehetra dimy taona no ho miakatra na inona na inona sata vaksiny dia tsy maintsy manome porofo ny valin'ny fitsapana molekiola ratsy COVID-19 mba hiditra ao amin'ny firenena. Ny fitsapana manan-kery dia tsy maintsy atao ao anatin'ny 72 ora amin'ny fotoana iaingan'ny sidina.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny protocole fidirana an'i Jamaika ankehitriny sy ny serivisy fitiliana ho an'ny mpandeha Kanadiana, kitiho eto.